Golis oo qado sharaf ku marti-qaadday ciyaartooyda Xulka Puntland | Golis Telecom Somalia
Golis oo qado sharaf ku marti-qaadday ciyaartooyda Xulka Puntland
Shirkadda Isgaarsiinta Golis ayaa qado sharaf ku martiqaadday xulka kubadda cagta Puntland ee kusoo guulaystay koobkii maamul-gobaleedyada dalka oo dhamaadkii bishii lasoo dhaafay kusoo gabgaboobay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Munaasbaddan oo lagu maamuusayay guusha ciyaartooydan ay kasoo hoyeen koobka maamulada dalka iyagoo huwan magaca Puntland ayaa ka dhacday Hotel Jubba ee magaalada Boosaaso waxana kasoo qayb galay maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Golis masuuliyiin ka tirsan dawladda oo uu kamid ahaa gudoomiyaha gobalka bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo iyo martisharaf kale.
Hogaanka Ganacsiga shirkadda Golis Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq) oo kalmad qaatay ayaa ku amaanay ciyaartooyda wacdarihii ay ka dhigeen ciyaarihii kasocday Muqdisho ee ay ku baratamayeen maamulada dalka iyo guushii ay kasoo hoyeen isagoo madasha ka xusay shirkadda Golis ay garab taagnayd mudadaii ay kujireen tartanka ilaa ay ka guulaysteen ayna garab taagnaan-doonto had iyo jeer.
Qaar kamid ah maamulka ciyaaraha Puntland ee hogaanka u hayay ciyaartooydan ayaa madasha ka hadlay iyagoo uga mahadceliyay shirkadda Golis casumaadda ay u fidisay iyo dhiirigalintii ay u samaysay intii ay ku jireen tartannka maamulada dalka.
Gudoomiyaha gobalka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo oo soo xiray xafladda ayaa isaguna u mahadceliyay cid walba oo qayb ka qaadatay in Puntland ay noqoto horyaalka maamulada dalka oo ay ugu horeeyaan ciyaartooyda, maamulkooda, iyo shirkadda Golis oo uu xusay inay wax badan ka caawisay ciyaartooyda intii ay ku jireen tartankii adkaa oo ay markii dambena kusoo guulaysteen.
Si kastaba ha ahaatee ciyaartooyda maanta ay martiqaadday shirkadda isgaarsiinta gayeena ee Golis ayaa guul taariikhi ah kasoo hoyay koobkii maamulada dalka oo ay kaga soo guulaysteen ciyaartii kama dambaysta xulka Jubba-land, waxana mudooyinkii dambe ay kusugnaayeen gobalada Puntland oo ay iyagoo koobka wada la wadaagayeen dareen farxadeed shacabkii ay magacooda ku ciyaarayeen.